Warbaahinta Soomaaliya oo looga digay hurinta colaadaha | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Warbaahinta Soomaaliya oo looga digay hurinta colaadaha
Warbaahinta Soomaaliya oo looga digay hurinta colaadaha
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku eeddeeyay warbaahinta gudaha inay tebiyaan wuxuu ugu yeeray “warar lagu buunbuuninayo ururka Al-shabaab ee xirriirka la leh Al Qaacidda taageerona loogu raadinayo si jiritaankooda.”
Eeddeyntaasi, Xasan Sheekh ayaa laga sii daayay TV-ga BPS wuxuuna qeyb ka ahaa wareysi maqal iyo muuqaal ahaa oo uu madaxweynuhu bixiyay intuu ku sugnaa Mareykanka. Isaggoo sidoo kale warbaahinta uga digay hurinta colaadaha, hase ahaatee warbaahinta ayaa iska fogeeyay dhaliisha madaxweynaha.
Dhinaca kale, ciidamadda nabadsuggidda dawladda Soomaaliya ayaa albaabada u laabay warbaahinta Shabeelle ee magaaladda Muqdisho iyaggoo weriyeyaasha qaarkoodna su’aallo dhawr ah ay weydiiyeen saraakiil ka socotay waaxda danbe baarka ee CID-da markii danbena la xiray.
Idaacaddaha Shabeelle iyo SKY FM ayaa hawadda si rasmi ah looga saaray waxyar ka dib markii ay ciidamadda ammaanka dawladda iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM ay soo afjareen hawlgel hubka looga dhigayey guddoomiyihii hore ee degmadda Wadajir, Axmed Daaci.
Amarka lagu xirray Shabeelle ayaa kasoo baxay wasaaradda amnigga sida ay xaqiijisay Idaacadda ay dawladdu maammusho ee Radio Muqdisho waxaana lagu eeddeeyay masuuliyiinta idaacaddaasi in hawlgelka socda si qaldan ugu tabiyeen bulshada kana dhigeen mid dano gaar ah laga leeyahay oo ka dhan ah beelaha Muqdisho looguna addeegayo dano shisheeye oo daahsoon sida xukuumaddu ay hadalka u dhigtay.
Saxaafadda madaxabannaan ee Soomaaliya ayaa inta badan caqabado waaweyn kala kulanta dawladda iyo xarakada Shabaab.
Previous articleGeyllanka golaha ammaanka oo gaaraya geyigga Soomaaliya
Next articleBeyle oo ka baaqday shirkii IGAD ee Soomaaliya